Published October 1, 2021 at 10:50 AM CDT
Xogta la sii daayay Arbacadii ayaa soo jeedisay in Iowa laga yaabo inay dhinac u weeciso dagaalka ka dhanka ah COVID-19. New York Times ayaa werisay in gobolku arkay 25% hoos u dhac kiisaska labadii toddobaad ee la soo dhaafay, iyada oo celcelis maalinle ah oo cusub ay tahay qiyaastii 1,100 xaaladood maalintii.
Isbitaallada, si kastaba ha ahaatee, waxay sare u kaceen 11% labadii toddobaad ee la soo dhaafay.
Si kastaba ha noqotee, bukaannada lagu daweynayo COVID-19 kaliya magaalada Sioux laba xarun caafimaad ayaa labanlaabmay hal toddobaad gudahood laga bilaabo 15 illaa 30 bukaan.
Dadka reer Nebraskan ee u baahan noocyada qalliinnada qaarkood waxay u baahan doonaan inay muddo dheer ku sugnaadaan cabbirka caafimaadka dadweynaha oo socon doona illaa Oktoobar.
Kordhinta waxay khuseysaa hababka xulashada bukaan -jiifka ee sugi kara afar toddobaad ama ka badan iyada oo aan si weyn loo beddelin natiijada bukaanka.
Xildhibaannada Nebraska ayaa ansixiyay khariidado cusub oo dib -u -qaybin ah.
Unicameral -ku wuxuu ugu dambayntii dejiyay lix khariidadood oo dib loo naqshadeeyay oo ku saleysan Tirakoobka 2020 -ka. Guddoomiye Ricketts ayaa si dhaqso ah u saxiixay biilasha sharci -dejinta ee sharciga.
Bandhigga Filimka Caalamiga ah ee Sioux City wuxuu bilaabmay habeenimadii Khamiista isagoo soo bandhigay filimka dokumentariga ah “Storm Lake”.
Filimku wuxuu ka kooban yahay Tifaftiraha Storm Lake Times, Art Cullen, wuxuuna tusayaa sida isaga iyo qoyskiisu u shaqeeyaan si ay wargeysku u noqdaan ganacsi maadaama ay tebinayaan sheekooyin muhiim ah oo muhiim u ah bulshada.
Bandhigga filimku wuxuu ka sii soconayaa Shineemada Weyn ilaa Axadda.
Somali News 09.29.21
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Iowa ayaa ka warbixinaya usbuucii seddexaad oo isku xiga oo kiisas cusub oo la xaqiijiyay COVID-19 ay mar kale kor u…